Strikeforce Kitty lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Strikeforce Kitty lalao
Lalao Strikeforce Kitty tamin'ny Category:
Ny tsara indrindra Strikeforce Kitty lalao
Saka sy ny bazooka
Taitra miaramila kittens 4 - mba mamitaka: Champions League
Taitra miaramila kittens 3 - mba mamitaka: Farany Stand
Taitra miaramila kittens 2 - mba mamitaka
Taitra miaramila kittens 1 - mba mamitaka
Games hanafintohina miaramila kittens - milalao maimaim-poana
Lalao Online Rehetra Strikeforce Kitty lalao
Games taitra tafika fanavotana kittens
rehefa misy zava-doza, mba hanampy anarana ny maherifo na ny ekipa manontolo. Avy ny tarehiny, na ny marimarina kokoa – mahafatifaty mordashek tolotra lalao kittens hanafintohina miaramilany mba hilalao an-tserasera.
– tampoka ny loza nitranga tao amin'ny vato lapa, mpanjaka niditra saka mpiremby amboahaolo, ka nangalatra tanora vavy iray. Ny andriambavy Tena tohina fa izy tsy sahy hanohitra, sy mpangalatra dia afaka nandositra mora foana ny babo.
Toy ny ray, ny saka nitaraina mafy ny zava-nitranga tamin'ny tokana, ary koa ny mpanjakan'i – dia tezitra mafy tamin'ny mpiambina izay hitany fa fahavalony, fandikana an- lapa sy moramora niala hisy mpanohitra. Fa adala hendry ray aman-dreny sy ireo mpitarika mba handresy ny fihetseham-po, ary ny mpanjaka avy amin'ny tafika mifidy ny tsara indrindra efatra mpiady.
nandray ny mba tsy hiverina ho any anati- tsy ny andriambavy, kittens dia lehibe, ary vonona ny nanohitra misy fahavalo. Fantany ihany ny fahavalo fambara – maha ao anatin'ny fianakaviana ny amboahaolo. Iza no miahiahy fa ny loza dia ny mahay mpangalatra. Fa ankehitriny dia tsy lasa lavitra loatra, ary ny nahatahotra tafiky ny mpanjaka avy amin'ny fanairana. Fa ny asa fitoriana mba ho mahomby, dia ilaina ny mahalala ny ody bokotra. Nandritra ny lalao, ny dona miaramila ny kittens amin'ny mangalatra, dia afaka mahazo fanampiny endri-javatra.
J – saka mamela anao mba hahafahan'ny fiainana tsy manam-petra, fa raha ny kittens prokachany sy manana, fara fahakeliny, 2 ainy,
K tsy misy farany matanjaka –,
L – vaovao farany manampy hevitra.
Nahery Fo fluffy toko
lalao rehetra ny dona miaramila ny kittens dia afaka hilalao ho maimaim-poana eo amin'ny vavahadin-tserasera. Hihaona ny mahery fo ny fitoriana atao isan-karazany izay avy tamin'ny zazakely tsara tarehy indrindra hitodika ho antony miaramila. Ary nilahatra ny rojo, ary isika no vonona ho an'ireo fitsapana. Tohano ny tanjaka sy ny Jelly trondro, hita teny an-dalana. Hanara-maso firy ​​kittens ny angovo, mijery ny angovo ambaratonga.
Mba hahitana Aiza no lalana kittens, hijery ny tampon- mizana, ary aoka ho fantatrareo ianareo lalana voalohany ao amin'ny afovoany, na akaiky ny tsipika fahatongavana. Ary raha reraka sy te- haka aina fotoana voafetra amin'ny andalan-teny, tsindrio eo amin'ny fiatoana fotsiny, ary afaka mandeha amin'ny raharaham-barotra.
ianao ho tonga mandritra ny lalao manerana Keys hanafintohina tafika kittens, ary izy ireo koa dia tokony hanangona ny hanokatra tratrany miaraka amin'ny akanjo sy ny fitaovam-piadiana, izay tany am-piandohana tsy misy tarehin-tsoratra. Fa dia ho tsikelikely manomboka ny hahazo ny zavatra rehetra ilainareo, ary ny tsipiriany rehetra dia zava-dehibe.
Poka ny antoko malemy loatra, tsy mandray anjara amin'ny ady amin'ny amboahaolo sy ny nitsambikina ny faritra mampidi-doza: spikes, harambato, lavaka famorian-drano, tonta, vato, nampitandrina famantarana. Koa satria ny fanaraha-maso dia nihena ho roa - zana-tsipìka bokotra (miakatra sy midina), ny dingana tsy mandreraka, ka afaka avy hatrany rehefa ho ny fomba ny loza.
Mark eo amin'ny fikarohana ho andriambavy!
ny lalao taitra tafika kittens 1 nandefa tantara miavaka. Mandehana nihanika ny andriambavy famonjena, saka dia vonona ny zavatra rehetra – ady fahavalo sy handresy ny loza, fa reraka haingana, raha tsy mba hanamafisana ny trondro sy ronono. Raha reraka ny mahery fo, dia ho lavo izy ireo fotsiny, ka dia hanana fitsaharana, ary Nandritra izany fotoana izany ny zanakavavin'ny mpanjaka – mijaly amin'ny fahababoana.
– fitohizan'ny fitokonana force lalao kittens 2 dia mampiseho fa ny mahay amboahaolo mbola tsy tony, ary ny saka dia nandeha teny an-dalana hisambotra indray ny lapan'ny mpanjaka. Hitsentsitra azy, ka pepero, ary mizara ny asa fitoriana.
tonga saina fa amin'ny saka mba ho namitaka, Fox teamed -niakatra tamin'i raccoons, ary ny lalao taitra miaramila kittens 3 mitondra antsika ho any amin'ny ady, izay ny herim-po hiarovana ny manda saka ny lapan'ny mpanjaka. Tsy mitovy velively ny miaramila ireo, ary ny saka ny Squad very ny lalao fa ny dona miaramila ny kittens 4 dia manome azy ireo ny fahafahana handresy. Ra azy izany, fa ny fahavalo intsony.